Top 5 4K Video Players
Atụmatụ na usoro Play / Dezie / tọghata 4K Videos
Chọrọ enwe 4K video / fim n'ụlọ n'enweghị ihe mgbochi? Ị nwere ike mkpa ụfọdụ Player, editọ ma ọ bụ converters gị PC. Echegbula onwe gị, ebe a ị ga-enweta ihe niile gụnyere Atụmatụ na usoro iji ha na nkọwa.
1 4K Ngosi
1.1 4K Ngosi
1.2 4K Video Ọmụmaatụ
1.4 4K mkpebi
1.5 Watch 4K Movies na TV
1.6 4K na akwụkwọ ahụ aja
1.9 Top 4K Content
2.2 4K Video ese foto
Ma gụọ 2.3 Top 4K TV
2.4 Top 4K Monitors
3 4K Video edezi
3.1 4K Video edezi Software
3.2 ome na Dezie 4K Video On Galaxy Cheta 3
4 4K Ntụgharị
4.1 Free 4K Video Ntụgharị
4.2 4K Video na MP4
5 Download 4K Video
5.1 Free 4K Video Downloader
7.1 4K Video Downloader Alternative
Ma ị na-achọ na-ekiri pụtara 4K videos na gị nnukwu widescreen kọmputa ileba anya, ọ bụ na gị smartphone, na-enwe mpempe software na bụ ike nke na-akpọ nke a esiwanye-ewu ewu na ọtụtụ ebe ada usoro nke àjà ihe ọṅụṅụ elu definition video were were ga-eme ka ndị niile dị iche na otú ihe ị na-enwe. Ma, ọ bụghị naanị 4K videos na eleghị anya ị ga-achọ ka egwu na-akpọ - mgbe HD videos nwekwara ike gosi mfịna maka ọtụtụ video egwuregwu. Nsogbu dị ka stuttering na codec incompatibility ka bụ zuru ebe nile, nke mere na-achọta a ukwuu pụrụ ịtụkwasị obi, eru video ọkpụkpọ omume bụ nke ndị dị otú elu mkpa.
Ọ bụ ezie na 4K videos na-ekesa karịa mgbe ọ bụla dị ka nke a technology-aghọ ndị ọzọ n'ọtụtụ ebe na cheaply dị ka amu amu videographers, ọtụtụ video ọkpụkpọ omume ka na-adịghị akwado ya. N'okpuru ị ga-ahụ a ndepụta na nkọwa nke ise nke kasị nnọọ mma 4K video Player na-ugbu a si n'ebe. Anyị na-atụ a na-enyere gị ka ị nhọrọ ziri ezi n'ihi gị 4K ị na-elele mkpa!
A na-akwalite dị ka ndị ike igwu egwu ọ bụla video na dị. Ha na-akwalite eziokwu na ọkpụkpọ ekwesịghị ata ahụhụ site na nnọọ nkịtị nsogbu na ọtụtụ ndị nwetara na otu oge ma ọ bụ ọzọ; na ịbụ ndị enweghị ike nke ndị ọzọ video Player na-enwe ike ịga nke ọma na-egwu ụfọdụ video formats, ma ọ bụ ọbụna ndị kasị nkịtị na-ewu ewu formats nke nwere ike e koodu dị iche iche. Ọzọ ọsọ gbasara akwụkwọ mkpesa na video ọkpụkpọ software bụ na faịlụ nwere ike na-a ogologo oge na-emeghe, ma ọ bụ na-ekere a stuttered ụzọ. Na eso ụzọ Wondershare ekwu na nke a ọkpụkpọ adịghị nwere ndị dị otú ahụ, na na niile videos egwu n'otu ntabi na seamlessly.
Wondershare Player Dị maka ma Windows usoro nakwa dị ka Mac OS X, na nso nso a mere maka Android ngwaọrụ dị ka mma. The ọkpụkpọ abụghị nanị maka video faịlụ, kamakwa na arụ orụ ọ bụla ọdịyo faịlụ dị ka mma. Akwado video formats agụnye na-ewu ewu AVI, MPEG, WMV na MKV (dị nnọọ ole na ole aha). Ọzọkwa, ndepụta okwu on videos ga-egosipụta n'ụzọ ziri ezi na formats nke ịnyịnya ibu, SSA na SRT.
MP3, WMA, FLAC, M4A, AAC na ndị ọzọ na audio formats na-akwado.
Ụkpụrụ nduzi nke Wondershare Player bụ "ihe niile na-arụ nri, oge niile". Nke a na-enye gị udo nke uche na ọbụna ndị video faịlụ na ị na-enwebeghị ike igwu egwu na ihe ọ bụla ọzọ software, pụrụ n'ezie na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na Wondershare.
Wondershare Player Bụ a free download na ekele, N'adịghị ka ọtụtụ free Player, adịghị tafia n'elu gị ahụmịhe na pop gbasie ma ọ bụ mgbasa ozi.
Ọzọ ọkpụkpọ na a maara nke ọma maka ike na-egwu azụ faịlụ na codecs na nwere ike ime ka ndị ọzọ omume-ada bụ VLC ọkpụkpọ. Nke a ọkpụkpọ e ndondo emelitere-agụnye nkwado maka 4K video playback na version 2.1. Nke a ọkpụkpọ nwere nkwado maka nnọọ nnukwu nso nke codecs, na-eme ka o kwe omume na-egwu azụ fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke video faịlụ (nakwa dị ka audio).
VLC Player dị maka free maka Mac OS X na Windows ígwè ọrụ. Ụlọ ọrụ nwere nhọrọ onyinye panel na ya website, ịgba ndị mmadụ ume inye a obere ego ma ọ bụrụ na ha na-enwe obi ụtọ na arụmọrụ nke software.
3. DivX Player
Nke a dị nnọọ ewu ewu na-ọma mara video ọkpụkpọ ugbu a na-akwado playback nke faịlụ ruo 4K na mkpebi. Ọ na-akwado DivX HEVC video na HEVC plugin, nakwa dị ka mgbe DivX na DivX Plus. DivX Player a na-akwalite dị ka a nnọọ elu mma mgbasa ozi ọkpụkpọ na bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu nhọrọ. Ụfọdụ n'ime pụrụ iche atụmatụ na na-ọma uru banyere na nke a software gụnyere ike iji ngwa ngwa ịgbanwee n'etiti ndepụta okwu n'asụsụ dị iche iche. I nwekwara ike mfe ịfegharị ebe dị iche iche soundtracks iji ịnụ atụmatụ dị ka onye nduzi si Commentary, ma ọ bụ ukporo ndise ke asụsụ ọzọ mgbe dị.
Ha lekwasịrị anya na-eme ka ọsọ ọsọ na laghachi ọrụ dị ka ire ụtọ dị ka o kwere DivX Player, dị ka nke a bụ ebe ọtụtụ egwuregwu nwere ike igosi na ha adịghị ike dị ka ha nwere ike igbachi elu, igansu, ma ọ bụ ugboelu kpamkpam na nnukwu, na àjà ihe ọṅụṅụ elu definition video faịlụ; karịsịa na ubé okenye kọmputa.
4. Media Player kpochapụwo na K-Lite Codec Pack
Nke a na-ewu ewu, yipụ ala version nke ukwuu bulkier Windows Media Player, bụ nnọọ fechaa mpempe software na bụ free, na ọ dịghị ihe toolbars ọ bụ mgbasa ozi packaged na ya. Otú ọ dị, wụnye Media Player Omuma na ya adịghị ma nye 4K playback ike. Ihe bụ isi bụ na-na-wụnye K-Lite Codec Pack. Nke a bụ nanị a ngwugwu nke ọtụtụ dị iche iche codecs, ndian kiet N'ihi na mma. Zuru ngwugwu nke K-Lite Codec Pack na-agụnye Media Player Omuma, ya mere ọ dịghị mkpa ka download na wụnye na iche iche. Ọhụrụ version nke K-Lite na-agụnye ma 32-bit na 64-bit codecs ke otu ngwugwu.
The fechaa ọdịdị nke Media Player Omuma onwe ya na-enye ohere software na-eji on ọbụna ndị kasị ochie nke kọmputa - ọ bụ ezie na-egwu azụ na 4K video ị ga-achọ a ọzọ dị ike usoro.
5. CyberLink PowerDVD PRO 14
CyberLink a maara nke ọma n'ihi na ya ọnụ na kensinammuo video edezi software, nakwa dị ka ha DVD na video playback software. PowerDVD nwere ike igwu azụ DVD na na Blu-ray discs, nakwa dị ka ọ bụla video faịlụ formats. Ọ na-akwado UltraHD 4K videos, nke nwere ike ọbụna n'ihu enwekwukwa na ha pụrụ iche TrueTheater Lighting technology, na enhances zuru ezu na na agba. The TrueTheater gburugburu mma na-enye gị gbasaa stereo mmepụta nhọrọ bụrụ na ị chọrọ jikọọ ya n'ụlọ gị gị na-eme ihe nkiri N'ihi na a zuru igbagburugburu ụda ahụmahụ.
CyberLink PowerDVD PRO 14-abịa mgbe a na-eri nke gburugburu $ 80, nke na-agụnye zuru ahịa nkwado na ohere mmelite.
The n'elu ise software omume niile n'ụzọ zuru ezu na-akwado 4K video playback, nakwa dị ka videos nke ndị ọzọ na mkpebi na dị iche iche formats. Ndị a bụ ndị na-eduga egwuregwu na ọgbọ ọhụrụ nke 4K video. Dị ka ndị ọzọ na ndị ọzọ video na-gbara na 4K mkpebi, anyị nwere ike na-ahụ ndị ọzọ na ndị ọzọ atụmatụ juru n'ọnụ n'ime ndị a na ndị ọzọ na mmemme na-n'aka na-mepụtara iji nye kasịnụ 4K ikiri ahụmahụ maka onye ọ bụla!
E nwere otutu 4K video converters na ike ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video converting bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Video Converter Ultimate, nke bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
Olee otú dezie 4K footage na Adobe Premiere
4K VS 1080P: Gịnị 4K dị mma karịa 1080P
ID3 Editor - Hichaa Your Music Collections
Atụnyere Best gụgharia Media Players
Olee otú bulite Video ka YouTube weebụ na saịtị na Mac (Yosemite gụnyere)
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere rylstim ihuenyo edekọ
Top Iri 3D Video ese foto
Top 50 Facebook Video Downloaders-arụ ọrụ maka All nyiwe
5 Great Video mmetụta na Adobe Premiere na otú iji ha
Kamera Video Editor: Olee dezie a kamera Video
Olee otú Tinye Awesome Gallery ka Tumblr Post
Olee otú dezie MPEG Video Files
> Resource> Video> Top 5 4K Video Players